तीरको शैयामा ५८ दिनसम्म सुतेर मृत्युवरण गरेका थिए भीष्म पितामहले
भीष्म पितामह एक महान योद्धा, उत्तम नेतृत्वकर्ता मात्र थिएनन्, महाभारतका यी अहंम पात्र ऐतिहासिक हिसाबले पनि प्रशिद्ध छन् । अहिलेका पुस्ताले उनको जीवनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । भीष्म राजा शान्तनु र गंगाका सन्तान थिए । भीष्म पितामहलाई महाभारतमा निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि चिनिन्छ । भनिन्छ कि, भीष्म पितामहलाई उनका पिता शान्तनुबाट इच्छा मृत्युको वरदान
भाग्य कसरी निर्माण हुन्छ ?
कुनै उच्च सफलता हासिल गर्नु, कुनै अत्यासलाग्दो विफलतामा फस्नु, यी दुबैलाई हामी एउटै नाम दिन्छौं, ‘भाग्यको खेल ।’ जब कसैले लोभलाग्दो उन्नती गर्छ, तब हामीलाई लाग्छ ‘फलानोको भाग्य कति बलियो !’ जब कोही रातारात कंगाल बन्छ वा असाह्य बन्छ, तब हामीलाई लाग्छ, ‘फलानोलाई भाग्यले ठग्यो ।’ के वास्तवमा मान्छेले जीवनमा भोग्ने उतार-चढाव ‘भाग्यकै खेल’ हो
गीताको यी १८ अध्यायमा लुकेको छ तपाईंको हरेक प्रश्नको जवाफ
गीता त्यो सर्वोत्तम ग्रन्थ हो, जसले जीवन दर्शनको गहन अर्थ दिन्छ । कतिले भन्ने गर्छन्, ‘श्रीमदभगवतगीता नपढी जीवन र जगतलाई बुझिदैन ।’ यो पौराणिक ग्रन्थमा जीवनको सार छ । यसको रचना महर्षि वेदव्यासले गरेका थिए । खासगरी महाभारत युद्धमा अर्जुन र उनका सारथी श्रीकृष्णबीच भएको संवादमा आधारित छ गीता । गीतामा ज्ञानयोग, कर्म योग, भक्ति
आसन, प्राणायम र ध्यानः कसरी विकास भयो पतञ्जली योग ?
अहिले योगको लहर छ । प्राणायाको लहर छ । ध्यानको लहर छ । भौतिक शरीर कति अनमोल छ भनेर खोजी हुन थालेको छ । व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान आदि विधीबाट शरीरको वास्तविक रहस्य खोतल्ने र यसको महत्व एवं मूल्यलाई बुझ्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले टोल-टोलमा योग प्रशिक्षण केन्द्र खुलेका छन् । घर-घरमा योग र
किन मनाइदैछ सुँगुर वाला नयाँ बर्ष ?
हामीकहाँ एउटा भनाई छ, ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ।’ तर, जात्रा हाम्रोमा मात्र होइन, विश्वमै अनौठा-अनौठा जात्रा एवं पर्व मनाइन्छ । हरेक पर्वसँग त्यहाँको रैथाने जनजीवन एकाकार भएको हुन्छ । त्यहाँको हावापानी, भूगोल प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ । र, यस्ता पर्व एवं उत्सवहरुले स्थानिय क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलयामान बनाइदिन्छ । विश्वमा विभिन्न समुदाय लुनर न्यू
गरुण पुराण अनुसार यस्ता व्यक्तिको घरमा भोजन गर्नु हुँदैन
हाम्रो पौराणिक शास्त्रहरुमा जीवन र जगतको बारेमा धेरै अमूल्य कुरा छन् । त्यस्तै उपयोगी शास्त्र हो, गरुड पुराण । गरुण पुराण त्यस १८ पुराणमा एक हो, जसको रचना वेद व्यासले गरेका थिए । यसमा २ सय ७९ अध्याय र १८ हजार श्लोक छ । गरुड पुराणमा मानव जातिको मार्ग दर्शनकालागि केही उपयोगी कुरा लेखिएको छ
यिनीहरुले महाभारत युद्ध लडेनन्, तर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे
पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा अनेकन पात्र छन्, जसको आ-आ–आफ्नै विशेषता र महत्व छ । महाभारत युद्ध कसरी भयो, किन भयो यस सम्बन्धमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । महाभारत युद्धमा कसले महत्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने सन्दर्भमा पनि कुनै रहस्य बाँकी छैन । यद्यपी त्यही युद्धमा केही यस्ता पात्र थिए, जसले हतियार उठाएनन् । अर्थात उनीहरु युद्धमा
१० नारी, जसले घर-परिवारमा सुख भित्र्याउँछन्
नारी, अर्थात घरको शोभा । नारीले नै हो, घर-परिवारलाई सन्तुलित राख्ने । खुसी दिने । स्वस्थ्य बनाउने । सुख ल्याउने । हामीले नारीलाई दुर्गा अर्थात शक्ति, सरस्वती अर्थात कला, लक्ष्मी अर्थात समृद्धिको रुपमा पूज्छौं । तर, कस्तो नारी ? प्रश्न उठ्न सक्छ । नारी भन्नसाथ नारी देहले मात्र पुग्दैन । उसको स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन, सोंच
तपाईंको नामभित्र कुनै वैज्ञानिक अर्थ छ ?
तपाईंको नाम के हो ? जवाफमा आफुलाई चिनाउने संज्ञावाचक कुनै वाक्य भन्नुहुनेछ । तपाईंलाई नाम सोध्दा जुन वाक्य भन्नुहुनेछ, त्यो फगत तपाईंलाई चिनाउने संज्ञा हुन् । संकेत हुन् । तर, अनुभूत गर्नुभएको होला, जब कसैले तपाईंको नाम उच्चाहरण गर्छन्, तपाईंको कान ठाडो हुन्छ । तपाईंलाई त्यो नाम औधी पि्रय लाग्छ, जसले तपाईंलाई चिनाउँछ । अझ
आज यस्तो दुर्लभ योगले १२:९ बजेपछि यी राशिको चम्किदैछ भाग्य:राशिफल/ २०७५ पुस १८ गते -सेयर गरौ
अनन्त श्री विभुषित, विश्व शान्तिदूत राजगुरू तथा जगतगुरू वीरेन्द्र परमहंश ज्योतिषाचार्य / आजको पञ्चाङ्-श्रीसूर्यदक्षिणायने श्रीशाके १९४० नेपाल सं.११३९ हेमन्तऋतु वि.सं.२०७५ पुस १८ गते तद्अनुसार सन् २०१९ जनबरी २ तारिख बुधबार, आजको चाडपर्व र उत्सव : त्रिपुष्कर योग बिहान ०३ बजेर ४८ मिनेटपछि, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र, पौष कृष्णपक्षको द्वादशी तिथि, मध्यरात्रीपछि ०३:४७ बजेसम्म,